Dowlada Japan oo sheegtay in ay u dagaalami doonto sidii Africa ay xubin joogta ah oga noqon lahayd golaha ammaanka – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada Japan oo sheegtay in ay u dagaalami doonto sidii Africa ay xubin joogta ah oga noqon lahayd golaha ammaanka
Dowlada dalka Japan ayaa balan qaaday in ay taageero xoog leh siin doonto dowladaha qaarada Africa sida ay ugu guuuleysan lahaayen in ay xubin joogta ah ka noqdaan golaha amaanka ee qaramada midoobay.
Ra’iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa sheegay in Africa ay xaq u leeyihiin in laga dhageysto fikradahooda islamarkaana lagu biiriyo arrimaha kala duban oo ay golahaasi ka hadlaan.
Shinzo ayaa ka hadlaayay shirweynaha lixaad ee u dhaxeya dalka Japan iyo dalalka qaarada Africa ee ka socda Magaalada tan Nairobi ayaa waxa u ka dhawaajiyay in Africa looga baahan yahay in ay kaalin ka qaatan xal u helida arrimaha iyo qodobada ay ka hadlayaan golahaasi ammaanka ee qaramada midoobay.
Golaha ammaanka ayaa ah gudi hoos taga qarama midoobay islamarkaana inta badan u xilsaaran arrimaha ammaanka iyo xasiloonida caalamka.
Ra’iisul wasaaraha ayaa wax aan la aqbali Karin ku tilmaamay in qaarada Africa aysan ilaa iyo hadda kamid noqonin golaha amaanka iyadoo sida caalamka kalana ay wajahayaan arrimo amni daro oo aad u daran.
Ilaa iyo hadda 60 wadan oo kamid ah qaramada midoobay ayaan kujirin oo aysan xubin joogta ah ka ahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Xubnaha hadaa golahaasi joogtada ah ayaa waxay kala yihiin dalalka France, Ruushka, Britian iyo dalka Mareykanka.
Wadamada xubnaha ka ah qaramada Midoobay islamarkaana aan kamid ahayn golaha amaanka ayaa ka qeyb gali karaa in ay fikrado ka dhibtaan arrimaha ay golahaasi ka hadlayaan balse wax cod ah aysan u qaadi Karin si loo meel mariyo.
← Mashruuca Beyond Zero oo helay deeq lacageed
Golaha Ammaanka oo cambaareeyay tijaabada Waqooyiga Kuuriya ee gantaalkeeda ridada dheer →
Xiisad ka Taagan Degmada Arabal Ismaamulka Baringo February 23, 2019
Ciidamada Booliska oo Xiray Tahriibiye Muqaadraadka Hiirowiin. February 23, 2019
(Dhageyso) Biyo la,aan ka jirta magaalada Rhamo February 23, 2019
(Dhageyso) Wiil Kenyan ah oo ku Xiran Wadanka Qadar oo ay Waalidiintiisa ka Hadleen February 23, 2019
Xiisad ka Taagan Degmada Arabal Ismaamulka Baringo
Ciidamada Booliska oo Xiray Tahriibiye Muqaadraadka Hiirowiin.
(Dhageyso) Biyo la,aan ka jirta magaalada Rhamo
(Dhageyso) Wiil Kenyan ah oo ku Xiran Wadanka Qadar oo ay Waalidiintiisa ka Hadleen